Xil. Jeesow: “Meelaha laga weerarayo Shabaab qorshaheeda waa la dejiyay” - Latest News Updates
Xil. Jeesow: “Meelaha laga weerarayo Shabaab qorshaheeda waa la dejiyay”
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka warbixiyay dullaanka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab, isagoona sheegay inay jiraan qorsheyaal looga xoreynayo goobaha ay ka joogaan gobolada dalka.
Waxa uu sheegay in Al-Shabaab aanay lahayn awood ay isaga difaacdo ciidamada Dowladda isla markaana ay bilaabeen inay ku firxadaan dhulka howdka ah iyagoo saddex iyo afar afar u socda.
“Meelaha laga weerarayo Shabaab qorshaheeda waa la dejiyay” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo u waramayay warbaahinta Muqdisho, wuxuuna sheegay in goobaha ay beegsanayaan ciidamada Dowladda ay ka mid yihiin sida Baraagaha ay biyaha ka cabaan, ceelasha iyo degaanada ay ku sugan yihiin.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay isku ekeysiinayaan dadka rayidka ah ayna maciin bidayaan inay shacabka ku dhex dhuuntaan iyagoo isku dayaya inay Muqdisho soo galaan firxadkooda.
Dhinaca kale Xildhibaan Jeesow ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inaysan Al-Shabaab ka kireynin guryahooda isla markaana aanay soo dhoweysan, wuxuuna tilmaamay in qofkii Shabaab ehelnimo u qariya uu la mid yahay iyaga, wuxuuna hoosta ka xariiqay in gumaadka shacabka Soomaaliyeed uu noqday mid muujinaya arxan darradooda.